| November 19, 2012 | Hits:1
| | ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်တွင် သမ္မတ အိုဘားမားတို့ တွေ့ဆုံပြီးနောက် နှုတ်ဆက်နေကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
7 Responses LeaveaReply Cancel reply
myanmar man November 19, 2012 - 8:06 pm ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံကို အသိအမှတ်ပြုပြီး လာရောက်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်သမ္မတကို လေးစားကျေးဇူးတင်ပါ တယ် ။ အမေရိကန် သမ္မတလာရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ကမ္ဘာမှာ မြန်မာကိုလူသိသွားစေခဲ့ပါတယ် ။ ခရီးသွား ဧည့်သည်တွေ တိုးပြီးဝင်ရောက်လာတော့မှာဖြစ်သလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်း ပိုမိုအခွင့်အလမ်းရှိလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဟိုတယ်တွေအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေပိုမိုကောင်းမွန်လာမှာ ဖြစ်သလို ပြည်ပပို့ကုန်သမား အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ ရေထွက်ပို့ကုန်သမားတွေ အတွက်လည်း ဈေးကွက်တွေရရှိလာနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Reply r gyi November 19, 2012 - 9:41 pm စိတ်ကြည်နူးစရာပါပဲ
Reply Aing Tong Maung November 19, 2012 - 10:10 pm This is not news. This is more of an opinion piece.
Reply swe htwe November 19, 2012 - 11:56 pm Welcome Obama. You know very well about us. Haveanice trip!!!
Reply sit min November 20, 2012 - 7:10 pm ငါကတော့အကောင်းမြင်ပါတယ်။ ဒေါ်စုပါတီနဲ့ ဒေါ်စုပဲတော့ပွဲမထုပ်ပါန့ဲ့့၊ကျန်တဲ့ပါတီတွေအားနာအုံး။လူလည်တော့မကျနဲ့ ။
Reply့ honey November 20, 2012 - 10:17 pmုမြန်မာပြည်ကိုနည်းပညာတွေပေးစေချင်တယ်။
Reply no kiss November 20, 2012 - 10:29 pm သဘောမကျတာတစ်ခုတော့ ရှိတယ် ။ ဒေါ်စုကြည်ကို သူ့ရဲ့ငယ်ရည်းစားလိုသဘောထားပြီး နမ်းသွားတာကိုတော့ မကြိုက်ဘူး ။ လူကြီးလူကောင်းပီသစွာ နှုတ်ဆက်သင့်တယ် ။ အနောက်နိုင်ငံသားမို့လို့ ခွင့်လွှတ်ပေးစရာအကြောင်း မရှိဘူး ။ မြန်မာနိုင်ငံက အခမ်းအနားဖြစ်လို့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို လေးစားလိုက်နာသင့်ပါတယ် ။ ရွှေတိဂုံစေတီပေါ် မှာ ဘိုဘားမားရဲ့လုံခြုံရေးတစ်ယောက်တောင် ခြေအိတ်မချွတ်ဘူးလားမသိဘူး ။ CNN Live show မှာတွေ့လိုက်ရ တယ် ။ ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး ။